Manamboatra Punchestown ny olona
Ataovy mihoatra noho ny mpijery fotsiny - Meteza ho anisan'izany
Manamboatra an'i Punchestown ny olona ary manantena ny handray anao izahay amin'ity toerana ara-panatanjahan-tena ity, izay nahazoana loka izay tototry ny tantara. Fantatra amin'ny fiarahabana mahafinaritra sy rivo-piainana mahafinaritra i Punchestown, manolotra traikefa ara-panatanjahantena Irlanda tokana sy tena izy izay ahafahanao manosika ny soroka amin'ireo hazakazaka am-pilalaovana rehefa mamorona fahatsiarovana amin'ny andro miaraka amin'ireo olo-malaza amin'ny indostria ianao.
Vitsy amin'ny fanatanjahan-tena amin'ny fanatanjahan-tena no ampitahaina amin'ny angovo sy ny fahamarinan'ny hazakaza-tsoavaly. Any Irlandy, ny hazakaza-tsoavaly no mampivondrona ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina. Avy amin'ny kolontsaina sy ny vakoka Irlandey izy io. Haingam-pandeha izy io, henjana izy, mifaninana mafy nefa mampientam-po, mampientam-po ary be fitiavana. Ny vanim-potoanan'ny hazakazaka Punchestown dia manomboka amin'ny Oktobra ka hatramin'ny Jona isan-taona miaraka amina fandrindrana 20 amin'ny fitambarany.
Mandritra ny dimy andro isaky ny volana aprily Punchestown dia mandray ny famaranana lehibe sy ny fisongadinan'ny vanim-potoana ho an'ny fanatanjahantena. Vola loka lehibe, ny soavaly irlandey sy britanika tsara indrindra, mpampiofana sy jockey mifaninana hametraka tompon-daka sy mahery fo. Izany dia miaraka amin'ny sakafo mahavariana, fivarotana, fialamboly ary rivotra iainana izay mahaliana olona 125,000 XNUMX mahery.
Miorina tsara amin'ny tranokala 450 hektara eo afovoan-tanànan'i Kildare eo amoron'ny tendrombohitra Dublin Wicklow ary ao anatin'ny seranam-piara-manidina Dublin sy afovoan-tanàna, ny hazakazakazakazakazaza dia iray amin'ireo folo voalohany manerantany.
Noho ny halehiben'ny tranokala sy ny fotodrafitrasa iarahana amin'ireo karazana fotodrafitrasa sy toerana anaovana azy, Punchestown dia heverina ho iray amin'ireo kaonseritra, hetsika ary seho tsara indrindra any Irlandy. Ny ekipa ao Punchestown dia manana traikefa sy fahalalana manan-karena amin'ny indostrian'ny hetsika izay miaraka amina fahaiza-manao isan-karazany dia hanampy ireo mpikarakara hetsika amin'ny famitana hetsika mahomby.
Ny fisafidianana trano fisakafoanana, pavilion, bar ary suite tsy miankina dia manome toky fa hiala sasatra ianao sy ny vahininao ary hankafy ny tsara indrindra amin'ny fanatanjahantena Irlanda miaraka amin'ny sakafo matsiro sy zava-pisotro amin'ny toerana milamina.
Adventure sy hetsika, Outdoors, Kildare mpitaingin-tsoavaly, Naas
Naas, County Kildare, Irlandy.